Hordhac iyo faa'iidooyinka fadhiga korontada – Baotian Furniture Co., Ltd.
Hordhac iyo faa'iidooyinka fadhiga korontada
Kursiga ciidda korontada ku shaqeeya wuxuu leeyahay badhamno kala duwan. Badhamada kor iyo hoos ee badhanka waxay xakamayn karaan kor iyo hoos xagga dambe ee fadhiga. Iyadoo lagu hagaajinayo fadhiga korantada, jagada qofka ee barkinta ayaa sidoo kale isbadali doonta, sida dib udhaca. Mararka qaarkood, dadku miskahooda gadaal ayey u dhaqaajin doonaan, iyo taa lidkeed. Haddii aad u hanqal taagayso inaad yeelato mid ka mid ah pls nala soo xiriir- a soo saaraha sariirta.
The "sixir" kursiga fadhiga korantada ee korontada waa marka la fadhiyo, dhabarka waa kor, loomana baahna in lagu daro a cagaha xagga hore, cagihiina si dabiici ah ayey u dhici karaan ama waxaa lagu ridi karaa lugta lugta. Hadaad ubaahantahay cag dhig, waxaad isticmaali kartaa badhanka xakamaynta si dabiici ah u kici kara. In kasta oo qaabdhismeedku ka dhib badan yahay kuraasta dhaqanka, waxqabadka waa lagu kalsoonaan karaa darajadiisuna way sarreeysaa.
Faa'iidooyinka fadhiga korantada:
1. Fadhiga korantada wuxuu leeyahay saameyn hoos u dhigida cadaadiska. Kursiga fadhiga safiirku waa jilicsan yahay cadaadiska jidhka bina aadamkuna wuu yar yahay, markaa waxay noqon doontaa mid aad ugu raaxeysan inaad ku fariisato kursiga fadhiga;
2. Fadhiga korantada wuxuu leeyahay shaqo duugis ah. Markuu qofku ku fadhiisto fadhiga geeska casriga ah oo hawl yar qabta, waxay sababi doontaa gariir yar oo ilo iyo waxyaabo jilicsan. Jirka bani'aadamka waxaa lagu soo rogay awoodda laastikada ee isbeddelada xilliyeed, kaas oo ka ciyaari kara doorka duugista.
3. Fadhiga korantada waa mid jajaban. Barkinta kursiga fadhiga waxaa laga sameeyaa waxyaabo jilicsan sida gogosha, bunni, isbuunyo, iwm. Dhowr gu ’ayaa hoosta ka jira, kuwaas oo labaduba jilicsan iyo laastik ah.
Faa'iidooyinka Sariirta Isku-dheelitirka Casriga ah
Tilmaam: Soo iibso fadhiga fadhiga, fadhiga korantada
Waqtiga boostada: 2020-08-01